Ukuthenga izinga nezicathulo - isinyathelo sokuqala ukuba aduduze futhi ukuphepha izinyawo zakho. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi ngisho izicathulo eqolo kudinga ukunakekelwa njalo. ukunakekelwa nsuku zonke is hhayi kuphela isikhathi ekuphileni inkonzo, kodwa futhi isikhathi eside uyigcine lemukelekako.
Umhlalaphansi, kunezigaba ezithile nezicathulo:
Shoes zigezwe emva ukusetshenziswa ngamunye. Indlela zokuhlanjululwa kuzoncika sikhathi sonyaka, degree of ngalo senziwa nokungcola izicathulo impahla. Summer izicathulo kwanele Sula ngendwangu emanzi, kodwa ukunakekelwa izicathulo ebusika, ngokuvamile kuhilela ukuwasha ngamanzi afudumele ne izindlela ezikhethekile. Phela, ukusulwa elula akususi kahle reagents amabhuzu ebusweni.
Sula nezicathulo kungenzeka kuphela okushisa okuvamile. Ungalokothi ome izicathulo zakho eduze amapayipi noma ezinye Ukushisa Imishini. Ngisho izicathulo manzi, ungakwazi ukubuyela esimweni esivamile ngosizo amaphephandaba abavamile. Uvalwe eyayigcwele iphepha ku izicathulo, futhi ushintshe it njengoba ezimanzi. Le ndlela hhayi kuphela ukugcina ukuma yokuqala isihlangu, kodwa futhi ivikela ebusweni kusukela ngokuhlaziya.
Ngesikhathi yokuhlanza kanye omiswe ukunakekelwa nezicathulo akugcini lapho. Ukucubungula izindlela ezikhethekile ukufihla hhayi kuphela ukukhubazeka ebonakalayo, kodwa futhi uvikele izicathulo zakho phezu ukusetshenziswa ngokwengeziwe. Cream, emulsions futhi izifutho okumele asetshenziswe kusihlwa. Njengoba umsebenzi wabo oyinhloko - ukudala ifilimu zokuzivikela kuvimbela ukumuncwa umswakama kanye owubhuqu kobuso izicathulo. Ukudala ifilimu enjalo kuthatha amahora angaba ngu-10.
Uma usebenzisa ukhilimu, azisebenzi ke esinabantu kakhulu. Lokhu kuyoholela ukuthi uzovela amabala izicathulo amafutha. izicathulo ukunakekelwa ebusika noma entwasahlobo kuphela, ingase ihlanganise isicelo ungqimba obukhulu ka ukhilimu phezu indawo amathe futhi uxhumano engenhla. Lokho kuzovimbela umswakama engena ngaphakathi.
Ngokuvamile kwenziwa isigamu sehora ngemva ukhilimu ukwelashwa surface. Kungcono ukuba bafeze wokucwebezelisa ngendwangu esithambile. Ngalo, a motion isiyingi ukukuthinta bonke ubuso izicathulo, bese ususe noma yikuphi okusele Lint ibhulashi kusukela izicubu. ukunakekelwa okunjalo nezicathulo kakhulu ngcono ukubonakala nezicathulo, nothuli akuyikhinyabezi ukubukeka ubuso bayo.
Ukuze ivikela kangcono kakhulu ku amathonya kwemvelo, kanye nezicathulo ngesonto kungenziwa elifakwe nge kwamanzi-cikayo emulsion ekhethekile. Into esemqoka - ukukhetha ithuluzi elifanele. Ngokuyinhloko, impregnation lihlukaniswe by izindlela ukuze kwelashwe evele bushelelezi futhi fleecy.
Kwamanye izinhlobo izicathulo babe izimfihlo ekhethekile anakekele.
Azonakekela Suede izicathulo, futhi ubuso nubuck futhi Suede kuhilela ukusetshenziswa izifutho, usula futhi emabhulashini elithambile ukuze bahlanze. Geza ngamanzi nezicathulo ezinjalo ngamanzi is hhayi Kunconywa, kanye ukusingatha ukhilimu.
ukunakekelwa obucayi kakhulu nezicathulo nge ebusweni lacquered. It is ezingafanelanga kahle ukusetshenziswa kwansuku zonke, njengoba kuthonywa lokushisa, umswakama kanye nezinye amathonya kwemvelo. Hlanza izicathulo okungcono lacquered ome indwangu ethambile noma izicubu. Ngemva yokuhlanza, aphathe izicathulo ngamafutha, ongahluziwe jelly noma glycerine. Ngenxa hydration ngesikhathi esifanele, kusale izicathulo ne ebusweni lacquered, awuvikele ukubukeka imifantu.
Noma yimuphi amabhuzu noma izicathulo ngezikhathi ezithile, Sula ngaphakathi nge swab ukotini ofakwe i-hydrogen peroxide. Lokhu kuzogwema iphunga ezingemnandi.
Ukuze kunakekelwe izicathulo okungcono ukusetshenziswa kwezimali kungekho nto enemibala emihle. Coloured okhilimu kanye emulsions okufanele isetshenziswe yokufihla imihuzuko ebonakalayo futhi scuffs.
Ukuze ukhethe indlela efanele yokunakekela uhlobo izicathulo, uyoba ukufezekisa imiphumela emihle kakhulu.
Mira Garden Resort Ihhotela 4 *: Ihhotela Izibuyekezo